Pamusoro mashanu mabhenefiti Ekutora Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
musha > Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
Cofttek ikambani ine hunyanzvi yanga iri mumusika kubvira 2012 uye inozivikanwa nemhando dzayo yepamusoro zvigadzirwa. kuwedzera ndeyekuti haina-guten uye haina maorergen akajairika. Nekudaro, vanhu vanotapurwa nemhando dzakasiyana dzezvinorehwa vanogona kutora ichi chekuwedzera pasina kurasikirwa nerunyararo rwepfungwa. iyo Cofttek PQQ yekuwedzera ndeimwe yeakanakisa Pyrroloquinoline Quinone zvinowedzera zviripo mumusika. Kana iwe uchitsvaga imwe yemiriwo imwe, tinokurudzira kutenga iyo PQQ Energy yekuwedzera kubva Cofttek.
Pyrroloquinoline Quinone disodium munyu FAQ
Chii chinonzi Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)?
Pyrroloquinoline Quinone kana PQQ isanganiswa iripo muzvirimwa pamwe nemabhakitiriya mazhinji uye imwe-cell eukaryotes, senge mbiriso. PQQ zvakare iripo zvakasikwa mumukaka wechipfuva chemunhu pamwe neiyo yakabikwa soya, kiwi, papaya, sipinachi, parsley, oolong, green pepper uye green green. Tsvagurudzo yakaitwa kumhuka dzakabatanidza kushomeka kwePQQ kana PQQ kushomeka neyakagadziriswa kwekudzivirirwa kwekudzivirirwa, kukanganisika kwekukura, kusabereka kubereka maitiro uye kuderedza metabolic kushanduka
Kwemakore mazhinji, vaongorori vakafunga Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) rudzi rwevhitamini. Zvisinei, kutsvagurudzwa kwakaitwa mumakore mashoma apfuura kwakaratidza kuti Pyrroloquinoline Quinone chinhu chinovaka muviri chine mavhitamini-akafanana hunhu hunokwanisa kuita seco-factor kana enzyme booster mune yekudzora-oxidation maitiro ayo anosanganisira kuchinjiswa kwemaerekitironi pakati pemaviri mhando. Mumashoko akapusa, PQQ inozvisunga nequinoprotein aripo mumuviri uye anoshanda akabatana navo kubvisa mahara radicals. Chidzidzo chekutsvaga chakawana quinoprotein kuita zvine zana zvakapetwa kupfuura Vitamin-C seanti-oxidant. Ongororo dzichangobva kuitika dzakaratidzawo kuti PQQ inokanganisa simba rekuchinjisa uye maseru metabolism nekuwedzera huwandu hwese hwemitochondria mukati memuviri. Aya ndiwo akakosha echokwadi akakonzera kumuka kamwe kamwe mukuzivikanwa kwePyrroloquinoline quinone mumakore achangopfuura.
Chii chinoita pyrroloquinoline quinone?
Pamusoro pekuva chirimwa chinokura chinhu uye bhakitiriya cofactor, pyrroloquinoline quinone (PQQ) inodzivirira mitochondria kubva kune oxidative kusagadzikana uye inosimudzira mitochondriogenesis.
Yakawanda sei PQQ yaunofanira kutora zuva nezuva?
Parizvino hapana wepamusoro kana wepasi muganho watangwa Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) chipimo chemushonga. Nekudaro, mhedzisiro inofungidzirwa kubva kuongororo yemhuka inoratidza kuti ichi chinoumba chinova bioactive kana chikatorwa mumadhosi akaderera se2 mg. Nekudaro, zvekudya zvakawanda zvinowedzera mazuva ano zviripo muhuwandu hwe20 mg kusvika 40 mg, inoonekwa seyakachengeteka renji. PQQ inonyanya kuwanikwa muchimiro chemacapsule, ayo vanhu vanorairwa kutora pane isina chinhu mudumbu. Zvisinei, vashandisi vanorayirwa kuti varege kupfuura makumi masere makumi masere pazuva.
Ndinofanira kutora rinhi CoQ10 mangwanani kana husiku?
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kutora CoQ10 padhuze nenguva yekurara kunogona kukonzera kushaya hope kune vamwe vanhu, saka zvakanak kuitora mangwanani kana masikati (41). CoQ10 zvinowedzera zvinogona kubatana nemimwe mishonga yakajairika, kusanganisira vanyoro veropa, antidepressants uye chemotherapy zvinodhaka
Chii chinomiririrwa neQ muCoQ10?
Coenzyme Q10 (CoQ10) antioxidant inogadzirwa nemuviri wako zvakasikwa. Masero ako anoshandisa CoQ10 kukura uye kugadzirisa.
Mitochondria inogona sei kumutswa?
Mukupindura kune zvinokonzeresa, mitochondria inoitika fusion / fission macircuit ekugadzirisa kune nharaunda. Saka zvine musoro kufungidzira kuti kupurasitiki kwemitochondrial dynamics inodikanwa kuti ivezve neuronal.
Ko CoQ10 ine quinine mairi here?
Coenzyme Q10 ndeyemhuri yezvinhu zvinonzi ubiquinones izvo zvine hukama necheminine quinine. Kana iwe uine chokwadi chekuti uri weergoria kune quinine, iwe unofanirwa kutaura kuna chiremba wako usati watanga zuva nezuva kuwedzera pamwe neCoQ10.
Nei vakatora quinine pamusika?
US Food and Drug Administration (FDA) yati kubviswa kwezvigadzirwa zvisina kubvumidzwa zvemushonga zvine quinine, ichinongedzera zvakakomba kuchengetedzeka uye kufa kunoenderana nekushandisa kwavo. Chiito ichi chikamu chekuedza kukuru kubvisa zvese zvisina kuchengetedzeka, zvinodhaka zvisina kugamuchirwa kubva pamusika.
Ndeipi iri fomu yakanaka yecoenzyme Q10?
Ubiquinol inokwana 90% yeCoQ10 muropa uye ndiyo fomu inonyanyisa. Nekudaro, zvinokurudzirwa kusarudza kubva kune zvinowedzera zvine iyo ubiquinol fomu
Ko Co Q 10 inoitirei muviri?
CoQ10 yakaratidzirwa kubatsira kuvandudza hutano hwemoyo uye shuga yeropa mutemo, kubatsira mukudzivirira uye kurapwa kwekenza uye kudzikamisa kuwanda kwemigraines. Izvo zvinogona zvakare kudzora kukanganiswa kweiyo oxidative inotungamira mukuneta kwemhasuru, kukuvara kweganda uye chirwere chehuropi nemapapu.
Ko PQQ kuyambuka ropa uropi chipingamupinyi?
Abstract. Pyrroloquinoline quinone (PQQ), neimwe nzira inozivikanwa se methoxatin, inogadziriswa nemvura, redox-cycling orthoquinone iyo yaimbove yakasarudzika kubva kutsika dze methylotropic bacteria. … Zvinoita sekuti mumhuka yese, zvisinei, PQQ haina kuyambuka chipingaidzo cheropa-chepfungwa.
Nei Tichida Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)?
Sezvo vanhu vanokwegura, huropi hwavo hunomanikidzwa kurwisa akawanda masosi ekukuvara. Nepo mamwe manyuko ekukuvara kunyoresa zero kune mashoma maitiro pahuropi hwemunhu, kumwe kukuvara kunova chinhu chinopa kukonzeresa kune neurodegenerative kusagadzikana uye kukuvara kunoenderera kunokanganisa mitsipa yeropa. Mumakore achangopfuura, vanhu vava kunyanya kunetsekana nezve hutano hwehuropi uye nekudaro, kutsvagisa, pamwe nekuziva nezve kutenderera kwehuropi uye hutano, kwakanyanya kuwedzera. Vatsvakurudzi vari kuramba vachiitisa zvidzidzo kuti vadzidze uye vaongorore zvinoitika zvemakemikari akasiyana uye makomputa pahutano hwehuropi hwemunhu. Imwe yemubatanidzwa yakamutsa kufarira kwevaongorori nemasayendisiti kutenderera pasirese ndiPyrroloquinoline Quinone (PQQ). Muchikamu chino, tinokurukura zvese zviripo kuziva nezvePyrroloquinoline Quinone, kusanganisira basa rayo, mabhenefiti, kuyerwa kwemiyero uye mhedzisiro. Saka, verenga mberi.
Deredza kusvibiswa kwehupfu. Ipa mishonga inodzivirira iyo mitochondria kubva kune oxidative kusagadzikana.
Shandisa zvinovaka muviri izvo zvinogonesa mitochondrial ATP kugadzirwa.
Unogona here kuwedzera mitochondria?
Kurovedza muviri ndiyo nzira yakanakisa yekuwedzera yako yekudya oxygen, yakakosha kune mitochondria's Krebs kutenderera. Sezvo muviri wako uchishandisa simba rakawanda, inozvimanikidza kuburitsa mamwe mitochondria kuenderana nezvinodiwa.
Pyrroloquinoline quinine, inozivikanwawo sePQQ, iri redox cofactor uye polyphenolic komputa inowanzo kuwanikwa muzvirimwa zvekudya. Inowanikwa mu cytoplasm yemasero uye inobatsira nekuderedza kuita uye oxidation.
Chii chinowanikwa quinine zvirimo?
Quinine mubatanidzwa unorwadza unouya kubva mumakwati emuti we cinchona. Muti uyu unowanzo kuwanikwa muSouth America, Central America, zviwi zveCaribbean, uye zvikamu zvegungwa rekumadokero kwe Africa. Quinine yakatanga kugadzirwa semushonga wekurwisa malaria.
Chii chinonzi Pyrroloquinoline Quinone disodium munyu (PQQ) inomiririra?
Yekubvunzurudza pre-qualification (PQQ, dzimwe nguva inonzi semupepeti wekuongorora mutengesi) inoisa nhevedzano yemibvunzo kune vangangotenderi kuti vapindure maererano nezinga ravo reruzivo, kugona uye kumira kwemari.
Ndeupi musiyano uripo pakati pecoQ10 uye ubiquinol?
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) isound-soluble quinone compound ine simba rakasimba rinorwisa-oxidant. Chidzidzo chekare mumakonzo chakapa kudya kwePQQ-kwakapera kwakaratidza kuti mwero wakakwira weserum triglyceride (TG) yakaderera mushure mePQQ yekuwedzera.
PQQ yakachengeteka here?
Tsvagurudzo yakaitwa kusvika parizvino yakaratidza kuti PQQ inoshivirirwa nemutumbi painotorwa mukati memiganhu yakatarwa. Nekudaro, kudarika iyo yakatemwa dosage kunogona kutungamira kune mhedzisiro-dzakadai sekurwadziwa kwemusoro, kupera simba uye kudonha. Nekudaro, vashandisi vanorayirwa kuti vateerere kune yakachengeteka 40 mg pazuva dosage uye kwete kupfuura 80 mg dosage. Zvinotonyanya kukosha, kunyange hazvo PQQ ichizivikanwa kuti inoshivirirwa nemuviri, zviri nani kubvunza chiremba usati watanga kudya kwayo kana uine mamiriro ezvinhu epreexisting.
PQQ iri nani pane CoQ10?
CoQ10 yakafanana neyemhando yepamusoro inovandudza kumhanya kwechitima. PQQ yakafanana nekambani yekuvaka iyo inogara ichishanda kuwedzera mota dzekuwedzera kuchitima chako. Mukupfupisa, CoQ10 inovandudza kumhanya kwesimba rako rekugadzira chitima, nepo PQQ iri kuwedzera uye kuvaka chinzvimbo chinowedzera kuchitima chako.
Yakawanda sei CoQ10 yandinofanira kutora?
Iko hakuna yakasimbiswa yakanaka dosi yeCoQ10. Zvidzidzo zvakashandisa madhizaizi eCoQ10 kubva pamakumi mashanu emamirigiramu kusvika gumi nemaviri emamirigiramu muvakuru, dzimwe nguva kupatsanurwa kuita madosi akati wandei mukati mezuva. Iyo yakajairwa zuva nezuva dhirigiramu zana kusvika mazana maviri emamirigiramu.
Ko CoQ10 inokonzeresa ropa kugwamba here?
Anticoagulants. CoQ10 inogona kuita kuti ropa-kuonda mishonga, senge warfarin (Jantoven), isinganyanyo shanda. Izvi zvinogona kuwedzera njodzi yekuvhara ropa.
Nei Q10 ichidhura?
Kana, zvino, iyo Q10 ichipfuura ichibva muropa ichipinda mumaseru uye mumaviri, inoshandurwa yodzokera kune yayo bio-simba fomu, ubiquinone. Iyo ubiquinol fomu yeQ10 haina kugadzikana uye, nekudaro, inodhura zvakanyanya kune iyo Q10 capsule inogadzira kushanda nayo.
Inguva yakareba sei CoQ10 inotora kushanda?
Sezvo mazinga eUbiquinol anotanga kudzoreredzwa muplasma yeropa, vanhu vazhinji vanofanirwa kuona zvakadzikira zviratidzo zvekuneta pamusoro pezuva rechishanu mushure mekutanga kuwedzera Kazhinji mukati memasvondo maviri kusvika matatu, huwandu hwemuviri wako weUbiquinol unosvika pakukwirisa, uye vazhinji vanonzwa mutsauko musimba mukati menguva ino.
Ndeipi mhedzisiro inokanganisa kutora CoQ10?
CoQ10 zvinowedzera zvinoita kunge zvakachengeteka uye kugadzira mashoma mhedzisiro kana zvatorwa sekurairwa.
Hunyoro mhedzisiro inogona kusanganisira matambudziko ekugaya akadai se:
Kumusoro kurwadziwa mudumbu
Nausea uye kurutsa
Mimwe mhedzisiro inogona kuitika inogona kusanganisira:
Kutemwa nemusoro uye dzungu
Kuchenesa kweganda kana kuputika
Kushatirwa kana kusagadzikana
Kuchengetedzwa kwekushandiswa kweCoQ10 panguva yekuzvitakura nekuyamwisa hakuna kusimbiswa. Usashandise CoQ10 kana iwe uri nepamuviri kana kuyamwisa pasina kubvumidzwa nachiremba wako.
Ko pyrroloquinoline quinone yakafanana nequinine here?
Pyrroloquinoline quinine, inozivikanwawo sePQQ, iri redox cofactor uye polyphenolic komputa inowanzo kuwanikwa muzvirimwa zvekudya. PQQ inogona kudyiwa sechikafu chekuwedzera kubatsira maseru emagetsi ekugadzira uye mitochondrial hutano uye kudzivirira muviri kurwisa oxidative kusagadzikana.
PQQ yakanaka kune moyo here?
Simba Rine Simba PQQ Inogona Kutadzisa Kutadza Kwemwoyo. Ongororo nyowani yekiriniki, yakaburitswa muchinyorwa chazvino cheCardiovascular Diagnosis & Therapy, inopedzisa kuti iyo yakakosha zvinovaka muviri Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) inogona kutora chikamu mukudzivirira kusingaperi kwemoyo kutadza (CHF).
Unogona here kutora PQQ uine nhumbu?
Mhedzisiro yedu inoratidza kuti kuwedzera pamwe nePQQ, kunyanya panguva yekuzvitakura nekuyamwisa, kunodzivirira vana kubva kuWD-inosimudzira yekuvandudza chirongwa chehepatic lipotoxicity uye inogona kubatsira kudzora denda riri kufambira mberi re NAFLD muchizvarwa chinotevera.
PQQ yakachengeteka here kune vane chirwere cheshuga?
Aya anti-chirwere cheshuga mhedzisiro yePQQ yaitsigirwa neayo antioxidative zvivakwa, sePQQ kwete chete yaitadzisa zvinyama LPO asi zvakare yakawedzera iyo serum insulin uye HDL, pamwe nemasekuru antioxidants.
Iwe unopa sei simba mitochondria?
Nzira 10 dzekusimudzira Yako Mitochondria
Idya mashoma macalorie.
Kutora PQQ Zvokuwedzera.
Kanda macarbones akacheneswa sesoda, chena chingwa uye makeke.
Idya mhando yemapuroteni senge nyama yehuswa-yakadyiwa huswa uye mazai akafudzwa
Tungamira kuwana maawa masere ekurara manheru ega ega.
Deredza kunetseka nemaitiro ekuzorora senge kufungisisa kana kukwiza muviri zuva nezuva
Edza kupisa kurapwa.
Wana kanenge 30 maminetsi ebasa zuva nezuva.
Idya zvekudya zvine antioxidant zvakapfuma ne resveratrol senge chokoreti yakasviba.
Idya zvinyorwa zve omega-3s uye alpha-lipoic acid.
Chii chinonzi PQQ antioxidant?
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) inoverengeka redox cofactor ichangobva kuwanikwa mumukaka wemunhu. PQQ yaive inoshanda antioxidant inodzivirira mitochondria kurwisa oxidative kushushikana-inosimudzira lipid peroxidation, protein carbonyl kuumbwa uye kumisikidza kweiyo mitochondrial yekufema cheni.
Chii chinonzi vitamini PQQ?
PQQ musanganiswa wepanyama unowanikwa mune dzakasiyana siyana zvekudya. Inoita se antioxidant uye inotsigira hutano mitochondrial basa. Zvinotorwa sekuwedzera kusimudzira mashandiro ehuropi.
Chii chinonzi PQQ 20?
Pyrroloquinoline quinone kana PQQ ichangobva kuwanikwa vhitamini-senge mukomboni unowanzo kuwanikwa muzvikafu zvezvirimwa. Yakatanga kuwanikwa seye cofactor yemabhakitiriya ayo akafanana nemaB B mavitamini anoita vanhu. PQQ ine antioxidant uye B-vhitamini-senge chiitiko, ine akasiyana siyana mabhenefiti ehuropi nemuviri.
Ndezvipi zvekudya zvine PQQ?
Iwe ungangodaro udye PQQ diki zuva rega rega. Inowanikwa mune zvidiki zvidiki mune zvakawanda zvekudya senge sipinashi, green mhiripiri, kiwifruit, tofu, natto (yakaviriswa soya), green tii, uye mukaka wevanhu. Nekudaro, isu kazhinji hatiwani yakawanda yePQQ kubva kuchikafu - ingofungidzirwa kuti 0.1 kusvika 1.0 mamirigiramu (mg) pazuva.
Ndezvipi zvekudya zvinowedzera mitochondria?
Mimwe yeiyi yakakosha michero inosanganisira L-carnitine uye creatine, izvo zviri zviviri zvakakosha pakupa simba kune mitochondria. Iwe unogona kuwana zvakawanda zvese nekuwedzera huswa hwakakodzwa nyama yemombe, bison, mazai, huku, bhinzi, nzungu, uye mbeu kuchikafu chako.
Kutsanya kunowedzera mitochondria here?
Chidzidzo chacho chakawana kuti kutsanya kunowedzera kubatana kwemitochondrial ne peroxisomes, rudzi rwe organelle runogona kuwedzera mafuta acid oxidation, yakakosha mafuta metabolism maitiro.
Ndeapi maekisesaizi anowedzera mitochondria?
Chidzidzo chitsva chakawana kuti kurovedza muviri - uye kunyanya kukwirisa kwepakati pekudzidzira maekisesaizi akadai sekuchovha bhasikoro uye kufamba - zvakakonzera maseru kuita mapuroteni mazhinji emagetsi avo-anogadzira mitochondria uye mapuroteni-anovaka ribosomes, achinyatso kumisa kukwegura padanho remaseru. .
Unogona kugadzirisa mitochondria yakakuvara?
Izvo zvakagadziriswa kuti kumisidzana nekukuvara, mitochondria ine nzira dzakatsanangurwa dzakarongeka dzekugadzirisa dzakada kufanana neidzo dzemukati, pakati padzo dziri: base excision kugadzirisa (BER), mismatch repair (MMR), single-strand break repair (SSBR), microhomology-yakagadziriswa kuguma kujoina (MMEJ), uye pamwe homology recombination.
Ndezvipi zvinowedzera zvinowedzera mitochondria?
Oral zvakasikwa zvinowedzera zvine membrane phospholipids, CoQ10, microencapsulated NADH, l-carnitine, α-lipoic acid, uye zvimwe zvinovaka muviri zvinogona kubatsira kudzorera mitochondrial basa uye kudzikisira kusagadzikana kuneta kune varwere vane chirwere chisingaperi.
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) Zvishandiso.
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) pakutanga yaifungidzirwa kuva vhitamini. Nekudaro, kumwe kutsvagurudza kwakamisikidza seyisiri-vhitamini mukomboni inoitika mune zvese kudya pamwe nematomu mammalian. Nekudaro, zvakakosha kuti usimbise kuti kunyangwe pasina kutsvagurudza kwakaratidza mammalian synthesis, angangoita 100-400 nanograms ePQQ inoumbwa mumuviri wemunhu mazuva ese. Nehurombo, iyi huwandu hauna kukwana kutsigira akasiyana mabasa ayo PQQ yakaratidzirwa kuita. Nekudaro, vanhu vanowanzo kurairwa kuti vatore PQQ nenzira yezvikafu zvinowedzera.
Kudya kushomeka muPQQ hakungotungamire mukudzikisira kukura asi zvakare kunoderedza basa repabonde. Saizvozvo, zvidzidzo zvinoverengeka zvakabatanidza PQQ nehukuru hwekukura uye mitochondrial biogeneis. Nemashoko akareruka, muviri wemunhu unogona kubatsirwa nePQQ sezvo ichisimudzira huwandu nebasa reMitochondria, zvobva zvaita kuti riwedzere kune mamwe masimba esimba. PQQ inozivikanwa zvakare kuve yakanakisa REDOX mumiriri uye inodzivirira pachako-oxidation uye polymerization.
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) Makomborero.
Kufarira kwePyrroloquinoline Quinone kwakawedzera zvakanyanya mukati memakore mashoma apfuura sezvo chigamba ichi chakabatanidzwa nezvakanaka zvakawanda Pano, isu tinotarisa ayo akakosha ePyrroloquinoline Quinone (PQQ) mabhenefiti.
① PQQ Yakave Yakabatana Neyakavandudzwa Pasi Pose Energy
Mitochondria idiki diki ma organelles aripo mukati memasero uye anowanzo kunzi senzvimbo dzemagetsi maseru sezvavanoburitsa simba kubva muchikafu, nokudaro vachipa simba maseru anoda kuita basa rawo. Pyrroloquinoline Quinone inobvumira mitochondria kuti ishande zvirinani, nokudaro zvichitungamira mukuwedzera kwesimba kugadzirwa mukati memasero. Aya masimba akawedzerwa mukati memasero anozowana nzira yawo kumuviri wese, zvichizotungamira kune kumwe kusimba uye simba rese. Kana iwe kazhinji uchinzwa kuneta kana kushoma simba, PQQ zvinowedzera zvinokubatsira iwe kuwedzera ako masimba mazinga. (1) Yakabuditswa: Mhedzisiro yePyrroloquinoline Quinone (PQQ)
② Inovandudza Tsinga Kukura Zvinhu
Pyrroloquinoline Quinone inopindirana nema cellular pathways uye mukuita, zvinogara zvichikanganisa zvine mutsigo kukura kwezvinhu. Izvi, zvakare, zvinotungamira mukusimudzirwa kwekuvandudzwa kwemasero emitsipa uye tsinga mune yakakomba nyama. Saka, PQQ inowanzo kuve yakabatana nekuvandudzwa kwehuropi basa. Sezvo NGF dysregulation inowanzo kuve yakabatana nechirwere cheAlzheimer, PQQ zvinowedzera zvinowanzo gadzirirwa kubatsira kurapwa kwemamiriro ane hukama nezera.
QPQQ Inake Yakave Yakabatana Neyakavandudzwa Kurara
Chidzidzo chakaongorora mhedzisiro yePQQ yekudya pane kurara kwevanhu. Chidzidzo ichi chakaongorora vatori vechikamu kwemavhiki masere uye vakaona kuti avo vaigara vachidya kwemavhiki masere vaigona kurara zvirinani. Chidzidzo ichi chakaratidzawo kuti kudya kwePQQ kunoderedza cortisol, iyo hormone yekushushikana iyo inokanganisa nekurara zvakajairika. Kunyangwe kutsvagurudza kuchidikanwa mune ino nharaunda, ongororo yekutanga inonyatsobatanidza PQQ yekudyiwa neakagadziridzwa kurara.
④ PQQ Inosimudzira Kwose Kwazvo Hwe-Kuve nekudzora Oxidative Stress
PQQ inozivikanwa neayo yakakwira anti-oxidant zvivakwa - inoderedza mwero weC-inoshanda mapuroteni uye IL-6 mukati memuviri, ese ari maviri anokonzera kuzvimba. Yayo oxidative zvivakwa zvakare inoita PQQ murwi anoshanda kurwisa oxidative kusagadzikana, chinova chikonzero chinowanzoitika chezvirwere zvakawanda zvisingaperi, senge carcinomas uye neurodegenerative hosha. PQQ inoderedza kushungurudzika nekudzora iyo inokanganisa oxidative inokonzerwa nemahara radicals uye inowedzera metabolism.
⑤ PQQ Mumubatanidzwa neCoQ10 Inovandudza Ndangariro Basa
PQQ kudya kwave kwakabatanidzwa nekuderedzwa kushushikana, uko, zvakare, kunotungamira mukusimudzira kugona kwekuziva uye nekuvandudza kwendangariro. Zvidzidzo zvekutsvaga zvakaitwa kuti zviongorore kuti PQQ inokanganisa sei ndangariro. Chidzidzo chekutsvaga chakawana kuti PQQ inoshanda yakabatana neCoQ10, coenzyme inoshanda se antioxidant inosimudzira metabolism uye inodzivirira maseru kubva mukukuvara. PQQ yakabatana neCoQ10 yakaratidza kuvandudza ndangariro basa.
⑥ Zvimwe Zvakanakira PQQ
Kupfuura pamusoro pezvakambotaurwa, PQQ inopawo zvimwe zvakanaka zvinotsvakwa izvo zviripo. Semuenzaniso, kuongorora kwekutanga kwakaratidza kuti PQQ kudya kunounza zvakare mukuvandudzwa kubereka.
Ndekupi Kwokutenga Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) Poda mu Bulk?
Kana iwe uri mugadziri wehutano hwekuwedzera uchibatanidzwa mukugadzira kwePyrroloquinoline Quinone pane yakakura-nzvimbo, zviri pachena kuti iwe unofanirwa kunge uchitsvaga izvo zvisvinu zvinotengesa zvinogona kukupa PQQ poda muhuwandu. Kutsvaga mutengesi anogona kuvimbwa nemhando uye kuvimbika kwakakosha pakuisa bhizinesi rakabudirira.
Kana uri kutarisa tenga Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) upfu muhuwandu, nzvimbo yakanakisa yekutenga ndeye Cofttek. Cofttek inyanzvi yepamusorosoro yemakemikari emakemikari akagadzwa muna2008 uye anoshanda pachisungo che "Quality Basis, Mutengi Wekutanga, Kutendeseka Service, Mutual Kubatsirwa". Iyo kambani yakazvipira kuyedza kwakakwana, iyo inobvumira iyo kuti ipe yepamusoro-soro masevhisi uye zvigadzirwa kune vatengi vayo. Cofttek parizvino inopa zvigadzirwa zvayo kumakambani emishonga muChina, Europe, India neNorth America. Iyo PQQ poda inopihwa nekambani inouya mumabatch e25 kilograms, izvo zvinokwana kuburitsa akawanda mabatch echigadzirwa chako. Zvinotonyanya kukosha, Cofttek ine timu ine ruzivo manejimendi uye yekutanga-kirasi R & D timu. Iwe unogona, saka, zorora uine chokwadi chekuti iwe uchawana zvese zvako zvekuunzira zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvemhando yepamusoro munguva yakakodzera fashoni. Kana iwe uri kutsvaga kutenga Pyrroloquinoline Quinone muhuwandu, bata timu kune cofttek sevhisi.
Co-muvambi, yekambani manejimendi manejimendi manejimendi hutungamiriri; PhD inogamuchirwa kubva kuFudan University mune organic chemistry. Anopfuura makore mapfumbamwe ezviitiko mune organic chemistry uye dhizaini dhizaini synthesis; angangoita gumi mapepa ekutsvagisa akaburitswa mune ane simba emagazini, aine anopfuura mashanu mashanu echiChinese patent.
(1) Yakabudiswa:Mhedzisiro yePyrroloquinoline Quinone (PQQ) Kuwedzeredza paAerobic Exercise Performance uye maIndices eMitochondrial Biogenesis mune Vasina Kudzidziswa Varume.
(2) Iyo neuroprotective mhedzisiro ye pyrroloquinoline quinone pane inoshungurudza huropi kukuvara
(3) Kufambira mberi kwezvino muzvidzidzo nezvehutano hunobatsira hwepyrroloquinoline quinone
(4) Mhedzisiro yeiyo Antioxidant Inowedzera Pyrroloquinoline Quinone Disodium Munyu (BioPQQ ™) paCognitive Functions.
(6) Rwendo rwekuongorora egt.
(7) Oleoylethanolamide (oea) -iye mashiripiti wand ehupenyu hwako.
(8) Anandamide vs cbd: ndeipi iri nani kune hutano hwako? Zvese zvaunoda kuti uzive nezvavo!
(9) Zvese zvaunoda kuti uzive nezve nicotinamide riboside chloride.
(10) Magnesium l-threonate inowedzera: mabhenefiti, muyero, uye mhedzisiro.
(11) Palmitoylethanolamide (pea): mabhenefiti, muyero, mashandisiro, kuwedzera.
(12) Wepamusoro 6 hutano hunobatsira hwe resveratrol zvinowedzera.
(13) Wepamusoro mashanu mabhenefiti ekutora phosphatidylserine (ps).
(14) Iyo yakanakisa nootropic yekuwedzera yealpha gpc.
(15) Iyo yakanakisa yekurwisa-kukwegura chinowedzera chenicotinamide mononucleotide (nmn).
Ndinoda pqq. Ndanga ndichiishandisa kweanoda kuita 2yrs. Kwandiri inowedzera simba. Kwete nenzira inosimudzira asi kungo wedzera kusimudzira mukugadzirisa kwepfungwa uye simba remuviri. Ndinoishandisa mazuva ese 10 kana 20 mg w 100mg ubiquinol. Ndinokurudzira.
Ndinotora 40 mg pazuva. Simba rangu rinowirirana muswere wese wezuva, uye ndinonzwa kuti zvinobatsira pakurara kwangu kukuru pamwe neashwagandha, magnesium, uye l-theanine.
Pyrroloquinoline Quinone yakataurwa muchidzidzo chekuti ungaporeswe sei nekufashukira. Inokurudzira biogenesis yemitochondria nyowani uye inobatana neCoQ10 yekugadzirisa maseru. Ini ndinoona musiyano wakakura musimba uye dzimwe nguva manzwiro pandinoatora.